Izindaba - I-ForeVR yethula umdlalo we-bowling we-VR othembekile kakhulu: “I-ForeVR Bowl”
I-ForeVR yethule umdlalo wayo wokuqala we-VR, i-ForeVR Bowl, yenkundla ye-Oculus Quest.Njengamanje, abanye abezindaba bakwamanye amazwe bawuzamile umdlalo futhi babelana ngolwazi lwecala.
Njengonjiniyela owaziwayo embonini, i-ForeVR yabamba leli thuba ngobuhlakani.I-“ForeVR Bowl” abayithuthukisile ihlanganisa i-physics engokoqobo nemithetho yegeyimu.Abadlali abakwazi kuphela ukudlala imidlalo embalwa bebodwa, kodwa futhi baphonsele inselelo abangani ku-inthanethi.
I-ForeVR Bowl ihlukaniswe ngezinhlobo zegeyimu ezine, umdlali oyedwa oyedwa nabadlali abaningi ababili.Abadlali bangadlala bodwa, noma bangaqhudelana kumameshi asezingeni ukuze baqhudelane indawo kubhodi yabaphambili.Ohlangothini lwabadlali abaningi, abadlali bangaqhudelana ku-inthanethi nabangani abangafika kwabathathu ngesikhathi esisodwa, futhi kulabo abangajabulela ukuhlangana komndeni, igeyimu iphinde ivumele abantu abangafika kwabayisishiyagalombili ukuthi bashintshane.
Kuhle ukusho ukuthi abadlali bangathola ukheshi ngokubamba iqhaza kumameshi asezingeni ku-ForeVR Bowl, engase isetshenziselwe ukuthenga izitayela eziningi zokuphosa.Ngenxa yokuthi ukulingisa kwe-ForeVR Bowl's physics kwenziwe kahle kakhulu, ibhola ngalinye emdlalweni liziphatha ngendlela ehlukile - hhayi nje ngokubukeka, kodwa ekusebenzeni.Amanye amabhola angcono uku-spin, amanye anejubane elimsulwa, kanti amanye ayizinto ezisindayo ezifile ezingabhampisi nhlobo.
Mayelana nokusebenza komdlalo, abezindaba bakwamanye amazwe banikeze ukuhlaziya okuphezulu kakhulu: “Imidlalo yevidiyo ye-Bowling kufanele ibe mnandi kubantu bawo wonke amazinga, kuyilapho inikeza ukujula okwanele kubadlali abazimisele ukuze baqhudelane futhi bazizwe benenselelo.I-ForeVR Bowl Ikwenza konke kalula, ihlanganisa imithetho ye-bowling yangempela nezithombe ezinhle kakhulu. "
I-Magic Interactive VR Platfrom—umshini wethu omusha we-9D VR Simulator Arcade, Ohlanganisa umdlalo we-bowling, ungachofoza isithombe ukuze ufunde kabanzi
Sinemidlalo eminingi ye-Immersive ku-vr arcade, thola imali ngokushesha nangokuqhubekayo!!!
Isikhathi sokuthumela: May-09-2022